Abaalmarinta Caddaaladda - Argagixisnimo Loo Raadinayo - Axlaam Axmad al-Tamiimi
Axlaam Axmad al-Tamiimi
Waa mawaadin Cumaan ah, Axlaam Axmad al-Tamiimi, ayaa sidoo kale waxaa loo yaqaanaa “Khalti” iyo “Halati,” waa aragagaxiso lagu helay dambi ah inay weerar argagaxiso ay XAMAAS u fulisay.
9ka bisha Agoosto, 2001, al-Tamiimi waxay bambo iyo qof isoo biimayay oo XAMAAS ah geysay maqaaxi lagu magacaabo biireeriya Sbarro oo ku taalla Baytal Muqadas, halkaas oo qofkii isoo biimeeyay bambkii iyo isaga halkaas isku qarxiyay, isagoo dilay 15 qof, oo ay ku jiraan toddobo carruur. Laba qof oo Ameerikaan ah ayaa sidoo kale weerarkaas lagu dilay – Judith Shoshana Greenbaum, waxay ahayd qof macallimad ah oo ka timid New Jersey, da’deedu waxay ahayd 31-sano jir oo uu r leh, iyo Malka Chana Roth, waxay ahayd 15-sano-jir. Halkaas 120 qof ayaa dhaabacyo ka soo gaaray, oo ay ku jiraan afar qof oo Ameerikaan ah. Mas’uuliyadda bambka XAMAAS ayaa sheegatay.
Sanadkii 2003 dhexdiisa, al-Tamiim maxkamad Israaiil ku taala ayay ka dhex qiratay dembi in iyadu ay ka qaybqaadatay weerarka oo waxaa maxkamad Israel ku taala ku xukumay 16 naf daa’im maadaama qaraxa ay gacan ka geysatay. Bishii Oktoobar ee 2011 ayaa la soo daayay soo daynta waxay qayb ka ahayd maxaabiis isdhaafsi uu dhexmaray Xamaas iyo Israaiil. 14ka bisha Maarso, 2017, Waaxda Caddaaladda ee Mareykanka waxay shaacisay dacwo dambiile iyo waaran lagu soo xirayo al-Tamiimi, iyada oo lagu qaadayo sharciga Mareykanka oo ah “shirqoolid isticmaal baaba’ aad u wayn oo lid ku ah muwaadinniin Mareykan ah oo Mareykanka dibadda ka jooga, kaas oo dhalliyay geeri.” Sidoo kale waaxda FBI da waxay al-Tamiimi ku dartey liiskeeda magacyada ah argagaxisada aadka loo raadinnayo oo waxay u arkaan in iyadu ay tahay qof “hubaysan oo qatar ah.”
Qof arday ahaan jiray oo wakhti yarna jornaaliiste telfishiin ahaa, al-Tamiimi iyada ayaa qofka is-qarxiyay geysay barta la bartilmaamaystay ka dib markii uu ballan qaadey weerarkaas geysto iyaga oo ku hadlayo magaca gacanta militariga XAMAAS, sida laga soo xigtay waaxda FBI da. Al-Tamiimi, oo ah qofka qorsheeyay oo hindisay weerarka Sbarro, barta waxay u dooratay maxaa yeeley waa maqaaxi aad mashquul u ah. Si tuhunka ay u yareeyaan, iyada iiyo qofka isoo biimayay waxay u labbisteen sida Israaiiliyiinta oo kale, iyada ayaa shaqsi ahaan qofka isoo biimayay geeyay, ku soo qariyay sanduuqa kataarada, ka soo qaaday magaalada West bank oo dhex keenay Baytal Muqadas. Sidoo kale al-Tamiimi waxay qiratay in dukaan adeegga guryaha oo Baytal Muqadas ku dhexyaalo ku dhex qarxisay miino macmal ah [IED] toddobaadyo qaraxa ka hor taas oo qeyb ka ahaa tijaab lagu baroobaynayay.
Waaxda Arrimaha Dibadda waxay Xamaas ay ku magacawday inay yihiin Urur Argaggixiso Shisheeye (FTO) sida hoos timaada Xeerka Laanta Socdaalka iyo Jinsiyadda iyo sida Urur Argaggixiso Caalami oo Gaar ah (SDGT) sida hoos timada sharciga E.O. 13224.
Barnaamijka Abaal-marinta Caddaalada waxay yahooheysaa inay bixinnayso lacag gaaraysa $5 milyan qofkii keena xog horseeda in la soo qabto al-Tamiimi ama lagu helo dambi doorkii ay ka ciyaartay weerarkan, iyadoo ay qeyb ka tahay abaal-marinta loo bixinayo Rabshadii dhacday 1993 oo looga soo Horjeeday Wadahadalkii Nabadda ee Bariga Dhexe.
Sawirro Dheeri ah
Qaraxii Sbarro Pizzeria ee 2001
Tariikhda(dooda) Dhalashada: 20ka Oktoobar, 1980, 20ka Nofeembar, 1980, 1da Janaayo, 1980, 20ka Janaayo, 1980
Halka uu ku Dhalatay: Al-Zarqa, Cumaan
Jinsi (lab ama Dheddig): Dheddig
Luqaddaha: Carabi, Ingiriis
Naanays: Axlaam Caref Axmad Al-Tamiimi, Axlaam Carafaat Mazin Al Tamiimi, Axlaam Cariif Axmad Al Tamiimi, Axlaam Caref Axmad Altamiimi, Axlaam Carif Axmad Altamiimi, Axlaam Caraf Axmad Tamiimi, Axlaam Caref Axmad Tamiimi, Axlaam Caref Axmed Tamiimi, Ixlaam Caraf Axmad Tamiimi, Achlam Tamiimmi, Axlaam Caraf Axmed Tmiimi, “Xalaati”, “Khalti”
Koox Argagaxiso: XAMAAS
Argagaxiso ay u Idmatay:
Wasaarada Arimaha Dibadda FTO: Oktoobar 1997
Wasaarada Arimaha Dibadda SDGT: Oktoobar 2001